AntiMicroX: chishandiso chinoshanda chekugadzira kiyibhodhi uye mbeva | Linux Addicts
AntiMicroX: kiyibhodhi inoshanda uye mbeva yemepu chishandiso
Isaac | | Linux Mitambo, Multimedia
AntiMicroX ndeyemahara uye yakavhurika sosi purojekiti kuti zvimwe havazivi zvakawanda nezvazvo. Asi kana iwe uchida kutamba, chokwadi unogona kuwana zvakawanda kubva pachishandiso ichi. Kutenda kwazviri, iwe unogona kugovera iyo gamepad yekupinda kukhibhodi uye mbeva, kuita mepu kune zvaunoda.
Zita rako richanzwika serinoziva kwauri, uye pakanga paine chirongwa chepakutanga chinonzi AntiMicro. Zvakanaka, AntiMicroX kuenderera mberi kweiyo chirongwa chakasiiwa. Saka iwe hauzove usingabatsiri mune iwo mazita emitambo yemavhidhiyo ausina rutsigiro rwe gamepad kana kuti marongero haana kunyanya kuchinjika.
Parizvino chirongwa chakaburitsa vhezheni 3.2.1, uye kuburitswa uku kunomiririra nhanho yekumberi kune AntiMicroX nevamwe. mabasa matsva uye maitiro:
Wedzera manotsi pane iripo update (inogoneswa muMicrosoft Windows).
Wedzera iyo SDL gamepad mepu dhatabhesi (ikozvino mamwe magamepads anogona kugoneswa nekusarudzika)
Wedzera ruzivo rwakakodzera nezve yakabatana yekuraira zvishandiso zvematanda kana marejista kana chimwe chinhu chisina kunaka uye iwe unofanirwa kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika kana kuti chii chiri kukonzeresa kukundikana.
Isa dingindira nemazvo kune vhezheni yeapp paWindows.
Inosanganisirawo SIGABRT manejimendi (ine printing stack).
Seta theme yeWindows.
Kuvandudzwa kwakazara kwekuita uye kushanda kweAntiMicroX application.
Uye mamwe mabhugi kubva kushanduro dzakapfuura akagadziriswa, semazuva ese mune akawanda software shanduro. Semuenzaniso, iyo AutoProfiles nyaya yevashandisi vari kushandisa Wayland kune yavo graphical nharaunda haichazovepo.
Muchidimbu, purojekiti inobatsira uye kuti inopa chivimbo chakawedzerwa kushanda naye. Kunyanya mushure mekubatanidzwa kweiyo SDL dhatabhesi.
Rumwe ruzivo nezve AntiMicroX chirongwa uye dhawunirodha - GitHub saiti
Dhawunirodha pasuru yacho mune flatpack fomati - Flathub
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » AntiMicroX: kiyibhodhi inoshanda uye mbeva yemepu chishandiso
Anovhura sosi anovandudza akaparadza maraibhurari ake achikanganisa zviuru zvezvikumbiro
WINE 7.0-rc5 inosvika iine anopfuura makumi mashanu ekugadzirisa uye kubvisa kumwe kudonha kwendangariro.